Filannoo Naannoo Tigraay: ‘Filannoon kun akka mana seeraan ala ijaarame ‘mana caraqaati” – MM Abiy Ahimad – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFilannoo Naannoo Tigraay: ‘Filannoon kun akka mana seeraan ala ijaarame ‘mana caraqaati” – MM Abiy Ahimad
”Itoophiyaa keessatti filannoon kan gaggeeffamu Boordii Filannoon qofa. Filannoon Tigraay akka mana seeraan ala ijaaramee- ‘mana caraqaati’,” jedhan Ministirri Muummeen Itoophiyaa Abiy Ahimad.
(bbcafaanoromoo)–MM Abiy Ahimad (PhD) bara haaraa Itoophiyaa 2013 sababeeffachuun miidiyaa biyyaalessaa EBC waliin waayee hojiilee bara xumuramaa jiru kanatti hojjetaman, danqaalee turan, milkaahina mootummaan isaanii goonfateefi bara haaraa dhufutti karoora qaban dubbataniiru.
Erga hooggansi jijjiiramaa waggaa lama dura aangoo qabatee as seektaroota garaagaraa keessatti jijjiiramni guddaan godhamuu dubbatan MM Abiy.
Bu’aan rifoormiiwwanii battalatti mul’achuu dhabuu akka danda’u kan himan Muummichi Ministiraa kun, akka abbaan itti ilaallutti gargar ta’uu mala malee jijjiiramni qabatamaan gama hedduun dhufeera jedhan.
Dhimmoota wayitaawoo tokko tokkorratti wanta dubbatan keessaa tokko kan filannoo Naannoon Tigraay murtee Manni Maree Federeeshinii murteesse diduun guyyaa Roobii gaggeessaa jirtudha.
Haala qabatamaa amma jiruun dhaabni isaaniifi dhuunfaattis isaan deeggarsa uummataa yeroo aangootti dhufan argatan amma dhabaa jiru moo hin jiran kan jedhuufi dhimmi kuni kan isaan yaaddessu ta’uufi ta’uu dhabuurrattis dubbataniiru.
”Hariiroon nuti naannoo Tigraay waliin qabnu, tarkaanfiin fudhannus uummata keenya achi jiru ni miidhamoo ni fayyada jennee madaaluuni,” jedhan MM Abiy dhimma naannoo Tigraay ilaallatuuf deebii yoo kennan.
”Garee uummata Tigraay irratti ijaarame uummatarraa yaadni adda fo’u hanga hin jirretti jibbi garee kanaa, garee kana balleessuuf hojiin ati gootu uummata miidhaaf saaxiluu hin qabu, sirriis miti.
Uummatni Tigraay uummata keenya, tarkaanfii uummata miidhu fudhannee badii geessisuufi wanta bor nama gaabbisiisu gochuu hin barbaannu kun qajeeltoo keenya isa tokkodha,” jedhan.
Filannoo Naannoon Tigraay murtee Mana Maree Federeshinii booddeetti jechuun gaggeessa jirtu ilaalchisees filannichi seera qabeessa akka hintaane dubbatan.
”Filannoon kun akka mana seeraa ala ijaarameeti (mana caraqaatii). Itoophiyaa keessatti filannoon kan gaggeeffamu Boordii Filannoon qofa waan ta’eef,” jedhan.
Itoophiyaa keessatti manni seeraan alaa, beekamtii mootummaatiin alatti, halkaniin (ifa addeessaatiin) ijaaraman – manneen ‘caraqaa’ (jecha Afaan Amaaraa addeessa yookaan ji’a jechuudha) jedhamuun beekamu.
Uummatni Itoophiyaafi paartileen mormituuf wantin dhaamu yaa’iin afooshaafi uqqubiin [filannoo] kun mataa dhukkubbii akka nutti hintaanedha. Ammas TPLF’tu bulchaa jira taphni ‘caraqaa’ kunis yeroo xumuramu kan bulchu TPLF.”
Filannoo biyyaalessaa dhufurratti garuu kan hin hirmaanne yoo ta’e fudhatama hin qabu jedhan.
”Humni filannoo akka biyyaatti fuula duratti godhamurratti hin hirmaanne paarlaamaa keessatti teessoo hin qabaatu,” jedhaniiru MM Abiy.
Saaaba kanaaf filannoo amma gaggeeffamaa jiruuf ”gatii hin qabuuf” jechuuniis dubbataniiru.
”Milishaa hedduu naannichi waan qabuuf lolaan adeemsa kana dhaabsiisuu dide mootummaan jedhee yaada namni kan jedhan MM Abiy, dubbiin lakkoofsa milishaan miti humna qabna garuu uummata waan miidhuuf dhifne,” jedhan.
Kaayyoon isaanii uummata hanqinoota misoomaa hedduu qabu kanaaf, hanqinoota isaa guutuu malee waraanaan miidhuu akka hin taanellee dubbatan.
”Mootummaan deeggarsa uummataa jabaa qaba”
Dhimma deeggarsa isaaniifi mootummaan isaanii amma qabu, akkasumas kun kan isaan yaaddessu ta’uu ilaalchisee gaaffii gaazexessaa EBC irraa dhiyaateef MM Abiy mootummaan isaanii ”mootummaa deeggarsa jabaa qabu ta’uusaa cimseen amana,” deebii jedhu kennaniiru.
”Miidiyaalee hawaasaarratti isa dubbatamuufi jedhamu akka dhugaafi beekumsaatti yoo fudhatte, madaalli dhugaa fi beekumsa kee isa yoo ta’e, hiika biraa kenna,’’ jedhan.
Mootummaan isaanii deeggarsa uummataa jabaa qabaachuu isaaf akka ragaatti wantoota dhiyeessan keessaa tokko biqiltuu biiliyoona 5 ganna keessa dhaabuu isaaniiti.
”Pireezidantiin Ameerikaa kana hin milkeessanii. Yookiin maallaqaan ykn teeknoloojii isaaniitiin milkeessuu danda’u malee, uummata miiliyoona 25 caalu… hirmachisuu Chaayinaanis Ameerikaaniis hin danda’an,” jedhan.
Nuti jalqaba Fulbaanatti xumuruu yaadnee uummatni Adoolessa keessa dursee kan xumure uummata yaada kana nurraa fudhate qofa osoo hin taane kan hojiitti hiikes waan ta’eefi.”
Ragaan lamaaffaan dhiyeessan ammoo misooma Shaggariif abbootiin qabeenyaa irbaata gatii qaaliirratti qooda fudhachuu isaaniiti.
”Hirbaata tokkoof miiliyoona shan kaffali yoo jennu, osoo yaada hin hiriin. Na hatu jedhee osoo hin yaadiin halkan tokkottii biiliyoona lamaa ol sassaabuu dandeenyarra,” jedhan.
Hojiin kun milkaahinaan xumuramee eebbaaf qophaa’uus dubbatan.
Deeggarsi Hidha Haaromsaaf godhamu kan qabbannaa’ee ture weerara Covid-19 keessattillee cimuun isaa, duula qulqullina naannoorrattifi weerara Covid-19’n miidhama qaqqabu xiqqeessuuf sagantaa maaddii qooduuf mootummaan waamicha dhiyeesserratti namni hirmaachuus, mootummaan isaanii deeggarsa uummataa qabaachuuf ragaa ta’uu dubbatan.
Dabaluuniis Oromiyaa keessatti hojii tola-ooltummaa ganna kana hojjetameen dareeleen barnootaa 28,200 ol ijaaramuus dubbatan.
”Uummatni waan nuti gaafannuun hirmaachuu isaatiin, biqiltuu haadhaabnu, roobni haa dabalu osoo jennuu amma Haroon Haramaayaa waggaa 10f gogee ture amma kunoo guuteera… Abjiaataan gogaa tures amma bakka dur turetti deeb’aa jira.”
Wanta deeggarsa uummataa barbaadu ani gaafadhee kaniin dhabe waan hin jirreef uummataaf galatan galcha kan jedhan MM Abiy, isa kaan ammoo filannoorratti ilaalla jedhan.
Godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksan Araddaa kululoo keessatti Humnoonni addaa naanoo somaalee